ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : ဇော်ဂျီ ရေးသော ကဗျာ
ထလော့မြန်မာ၊ အိုမြန်မာတို့ - တို့ရွာတို့မြေ၊ တို့ရွာမြေ၀ယ်
ဆန်ရေစပါး၊ များလည်းများ၏ - များပါလေလဲ၊ တမွဲမွဲနှင့်
ဆင်းရဲကာသာ၊ ကာလကြာလျှင် - ယာစကာမျိုး၊ တညှိုးညှိုးနှင့်
ပုထိုးမြင့်မောင်း၊ ကျောင်းကြိုကျောင်းကြား - လှည့်လည်သွားလျက်
မစားလေရ၊ ၀မ်းမ၀၍ - ဆွမ်းမျှမတင်နိုင် ရှိမည်တည်း။
ထလော့မြန်မာ၊ အိုမြန်မာတို့- တို့ရွာတို့မြေ၊ တို့ရွာမြေ၀ယ်
ရေချိုသောက်ရန်၊ မြစ်ချောင်းကန်နှင့် - သီးနှံချိုပျား၊ များလည်းများ၏
များပါလေလဲ၊ တမွဲမွဲနှင့် - ဆင်းရဲကာသာ၊ ကာလကြာလျှင်
မြင်သာမြင်ရ၊ မစားရ၍ - လောကပြိတ္တာ ဖြစ်မည်တည်း။
ထလော့မြန်မာ၊ မြန်မာထလော့ - အားမပျော့နှင့်၊ မလျော့လုံ့လ
သူကစ၍၊ ငါကအားလုံး - လက်ရုံးမြားမြောင်၊ ဉာဏ်မြားမြောင်နှင့်
ဤမြေဤရွာ၊ ဘယ်သူ့ရွာလဲ ?
ဤယာစပါး၊ ဘယ်သူ့စပါးလဲ ?
Posted by ရိုးရိုး at Saturday, March 27, 2010
Sub title SHE SELLS SEA SHELL BY THE SEA SHORE
Thai protestors refuse discussions
ယိုးဒယား - မှ ဆန္ဒပြပွဲ ဓါတ်ပုံ သတင်း
ထိုင်း နိုင်ငံ က ဆန္ဒပြပွဲ 27th March 2010 Saturday...
Youtube က ကလေးတွေ ရဲ့ဟာသလေးများ